Qareenada haweenka ah oo xad gudubyo ka cabanaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirada waxbarashada iyo dugsiyada sare dalkan ee Anna Ekström. sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
Qareenada haweenka ah oo xad gudubyo ka cabanaya
La daabacay onsdag 15 november 2017 kl 09.59
Qaar ka mid ah haweenada qareenada dalkan ka ah ayaa cadeeyay in ay wakhtiga shaqada la soo kulmeen xad gudub amba faraxumeeyn.
4 445 ka mid ah qareenada haweenka ah ayaa sidan ku soo muujiyay wargeeyska Svenska Dagbladet.
Wasiirka caddaaladda iyo arrimaha gudaha dalkan Sweden Morgan Johansson ayaa sidan sheegay mar laga wareeystay barnaamijka Studio ett:
-Waxeey tusaysa in ay xad gudubyadani yihiin dhibaato ka jirta bulshadda oo u baahan in xal degdeg ah loo sameeyo. Hasayeeshe waan soo dhaweeynayaa kumankuumka haween ee hadda awooda u helay in ay arrimahan ka hadlan.
Wasiirada waxbarashada iyo dugsiyada sare dalkan ee Anna Ekström ayaa ku faraxsan soona dhaweeynaysa haweenka cabashadooda ku soo daabacay wargeeyska Svenska Dagbladet. Iyada qudheeda ayaa qareen soo ahaan jirtay.
-Aad ayey u wanaagsantahay in ay gabdhahani mushkiladooyinka ay la kulmeen ka hadlaan. Arrinkani ma ahaa wax ku cusub xirfadan, xitaa waagi aan ka soo shaqeeyn jiray haweenku weey ka caban jireen dhibaatooyinka raggu ku hayaan. In iminka xishoodka la joojiyo oo lagu wargeeysyada arrimahan lagu soo daabaco aad ayaan u soo dhaweeynaya, ayey sheegtay Anna Ekström.
4 445 qareen ee muujiyay dhibaatooyinka ka soo gaadhay ragga ay la shaqeeyan ayaa sheegay in xad gudubyada ay la soo kulmeen kala duwan yihiin. Tusaale ayaa hadal ahaan lagu xad gubay, qaar kale na waxeey u jeedaan in taabasho xad gudub ah ay lagu sameeyay.
Ololaha Metoo ayaa ka dhashay kashifaada filim soosaaraha mareeykanka ah ee Harvey Weinstein oo xad gudub ku sameeyay dhowr haween oo caan ah. Tan ayaa sameeysay in haweenka aduunku boggaga internetka Instagram, Facebook iyo Twitter ku soo daabaceen magacyadii nimankii iyaga xumeeyay.